China 10 board circuit board ho an'ny orinasa sy mpanamboatra PDA Ultra-lasantsy | Pandawill
Vidin'ny FOB: US $ 0,85 / Piece
sosona 10 sosona
Ny hatevin'ny birao 1.20MM
Haben'ny tontonana 300 * 280MM / 2 PCS
Famaranana ambonin'ny fanitrihana volamena (ENIG)
Min Line Width (mm) 0.10mm (4 mil)
Impedance Impedance tokana & impedance tsy mitovy
Application PDA matevina indrindra
Amin'ity fizarana ity dia te hanome anao antsipiriany ifotony momba ny safidin'ny rafitra, ny fandeferana, ny fitaovana ary ny torolàlana momba ny lamina ho an'ny takelaka multilayer. Izany dia tokony hanamora ny fiainanao amin'ny maha mpamorona sy fanampiana amin'ny famolavolana ireo takelaka misy anao pirinty mba hamboarina ho amin'ny famokarana amin'ny vidiny ambany indrindra.
Haben'ny faritra faratampony 508mm X 610mm (20 ″ X 24 ″) ---
Isan'ny sosona hatramin'ny 28 sosona Amin'ny fangatahana
Ny hatevin'ny voatsindry 0.4 mm - 4.0mm Amin'ny fangatahana
Amin'ny maha mpamatsy teknolojia PCB isan-karazany antsika, ny volany, ny safidiny amin'ny fotoana itarihana, dia mifantina fitaovana mahazatra izahay izay ahafahana mandrakotra ny fantsom-pifandraisana maro karazana karazana PCB ary misy ao an-trano foana.
Ny fepetra takiana amin'ny fitaovana hafa na amin'ny fitaovana manokana dia azo fenoina ihany koa amin'ny ankamaroan'ny tranga, fa, miankina amin'ny fepetra takiana marina, hatramin'ny 10 andro fiasana eo ho eo no ilaina mba hamoahana ilay fitaovana.
Mifandraisa aminay ary mifanakaloza hevitra momba ny zavatra ilainao amin'ny iray amin'ireo ekipa mpivarotra na CAM anay.
Fitaovana mahazatra mitazona amin'ny stock:
singa hateviny fandeferana Karazana manenona
Sosona anatiny 0,05mm +/- 10% 106
Sosona anatiny 0.10mm +/- 10% 2116
Sosona anatiny 0,13mm +/- 10% 1504
Sosona anatiny 0,15mm +/- 10% 1501
Sosona anatiny 0.20mm +/- 10% 7628
Sosona anatiny 0,25mm +/- 10% 2 x 1504
Sosona anatiny 0.30mm +/- 10% 2 x 1501
Sosona anatiny 0.36mm +/- 10% 2 x 7628
Sosona anatiny 0,41mm +/- 10% 2 x 7628
Sosona anatiny 0,51mm +/- 10% 3 x 7628/2116
Sosona anatiny 0,61mm +/- 10% 3 x 7628
Sosona anatiny 0.71mm +/- 10% 4 x 7628
Sosona anatiny 0,80mm +/- 10% 4 x 7628/1080
Sosona anatiny 1,0mm +/- 10% 5 x7628 / 2116
Sosona anatiny 1,2mm +/- 10% 6 x7628 / 2116
Sosona anatiny 1,55mm +/- 10% 8 x7628
Prepregs 0.058mm * Miankina amin'ny layout 106
Prepregs 0.084mm * Miankina amin'ny layout 1080
Prepregs 0.112mm * Miankina amin'ny layout 2116
Prepregs 0.205mm * Miankina amin'ny layout 7628
Cu matevina ho an'ny sosona anatiny: Standard - 18µm sy 35 µm,
amin'ny fangatahana 70 µm, 105µm ary 140µm
Tg: eo ho eo 150 ° C, 170 ° C, 180 ° C
εr amin'ny 1 MHz: ≤5,4 (mahazatra: 4,7) Misy bebe kokoa amin'ny fangatahana
Ny PCB stack-up dia singa iray lehibe amin'ny famaritana ny fahombiazan'ny EMC amin'ny vokatra iray. Ny stack-up tsara dia mety hahomby amin'ny fampihenana ny taratra avy amin'ny tadivavarana amin'ny PCB, ary koa ny tariby mifatotra amin'ny tabilao.
Ireo lafin-javatra efatra no zava-dehibe raha ny amin'ny fiheverana ny fametrahana ny birao:
1. Ny isan'ny sosona,
2. Ny isa sy ny karazana fiaramanidina (herinaratra sy / na tany) ampiasaina,
3. Ny filaharana na ny filaharan'ny sosona, ary
4. Ny elanelana misy eo amin'ny sosona.
Matetika dia tsy dia misy fiheverana firy omena afa-tsy ny isan'ny sosona. Amin'ny tranga maro, ireo lafin-javatra telo hafa dia mitovy lanja ihany. Rehefa manapa-kevitra ny isan'ny sosona dia izao no tokony hodinihina:
1. Ny isan'ny signal tokony halefa sy ny vidiny,
3. Tsy maintsy mahafeno ny fepetra takiana amin'ny famoahana kilasy A na kilasy B ve ny vokatra?
Matetika ilay entana voalohany ihany no dinihina. Raha ny tena izy dia zava-dehibe avokoa ny entana rehetra ary tokony horaisina mitovy. Raha misy endrika tsara indrindra azo trandrahana amin'ny fotoana farafahakeliny ary amin'ny vidiny ambany indrindra, ny entana farany dia mety ho manan-danja indrindra ary tsy tokony holavina.
Ny andalana etsy ambony dia tsy tokony holazaina amin'ny hoe tsy afaka manao endrika EMC tsara amin'ny tabilao efatra na enina ianao satria afaka manao izany. Manondro fotsiny izany fa ny tanjona rehetra dia tsy azo tanterahina miaraka ary ilaina ny marimaritra iraisana. Satria ny tanjona EMC tadiavina rehetra dia azo tanterahina amin'ny solaitrabe valo sosona, tsy misy antony tokony hampiasa mihoatra ny valo sosona hafa ankoatry ny fampidirana ireo sosona fitaterana marika fanampiny.
Ny hatevin'ny fanamoriana mahazatra ho an'ny PCB multilayer dia 1.55mm. Ireto misy ohatra vitsivitsy amin'ny PCB multilayer stack up.
Ny Metal Core Printed Circuit Board (MCPCB), na PCB mafana, dia karazana PCB izay misy fitaovana vy ho fotony ho an'ny ampahany manaparitaka ny hafanan'ny tabilao. Ny tanjon'ny fototry ny MCPCB dia ny famerenana ny hafanana hiala amin'ireo singa birao fanakianana ary amin'ireo faritra tsy dia misy dikany loatra toy ny famerenan'ny heatsink vy na ny metaly fototra. Base metals ao amin'ny MCPCB dia ampiasaina ho solon'ny FR4 na CEM3 boards.
Metal Core PCB Fitaovana sy hateviny
Ny fotony vy an'ny PCB mafana dia mety ho aliminioma (PCB core aluminium), varahina (PCB varahina fototra na PCB varahina mavesatra) na fifangaroan'ny alloys manokana. Ny mahazatra indrindra dia ny PCB core aluminium.
Ny hatevin'ny vy metaly ao anaty takelaka fototra PCB dia mazàna 30 mil - 125 mil, fa ny takelaka matevina sy mahia kosa azo atao.
Ny hatevin'ny varahina MCPCB dia mety 1 - 10 oz.
Tombony amin'ny MCPCB
MCPCBs dia mety manararaotra ampiasaina amin'ny fahaizany mampifangaro ny polymer diélectric layer miaraka amina conductivity avo lenta ho an'ny fanoherana hafanana ambany.
Metal core PCBs mamindra hafanana 8 ka hatramin'ny 9 heny haingana noho ny FR4 PCB. MCPCB laminates manaparitaka ny hafanana, mitazona ny hafanana miteraka hafanana mangatsiaka kokoa izay miteraka fahombiazan'ny fiainana sy fiainana.
Previous: Valan-tsambo boribory 8 sosona OSP vita ho an'ny PC tafiditra
Manaraka: 12 layer avo lenta FR4 PCB ho an'ny Embedded System